Incwadi entsha kaHaruki Murakami kwiivenkile ezithengisa iincwadi kwakamsinya | Uncwadi lwangoku
Yaziwa kancinci, kodwa kwisithuba esingaphantsi kweenyanga ezimbini siza kuba noshicilelo olutsha oluvela kuHaruki Murakami omkhulu. Incwadi iya kuba nesihloko "Ndithetha ngantoni xa ndithetha ngokubhala?", eya kukukhumbuza omnye owabhala kwiminyaka eyadlulayo ngothando lwakhe lwe 'ukubaleka', isihloko "Ndithetha ukuthini xa ndithetha ngokubaleka". Ewe, olu papasho luya kwenziwa ukusuka Abahleli beeTusquets, obesoloko ephethe iimpapasho zombhali waseJapan apha eSpain.
Okulandelayo, sikushiya ne-synopsis, ukuba ufuna ukuyifunda kwaye uyishiye igcinwe kwivenkile yakho ethembekileyo. Nangona ukuba ufana nam kwaye ubulindile njengoMay Water, incwadi entsha yaseJapan, awuzukufuna ukubona isithethi okanye isiciko sokwenza njalo.
UHaruki Murakami ubonakalisa prototype yombhali onesizungu kwaye ugcinwe; Uzijonga eneentloni kakhulu kwaye uhlala egxininisa ukuba akonwabanga ukuthetha ngaye, ngobomi bakhe babucala kunye nombono wakhe wehlabathi. Nangona kunjalo, umbhali ukwaphule oko ukuthula ukuze abelane nabafundi bakhe ngamava akhe njengombhali nanjengomfundi. Ngokusekwe kubabhali abanjengoKafka, uChandler, uDostoevsky okanye uHemingway, uMurakami ubonakalisa uncwadi, ngengcinga, ngamabhaso oncwadi nakwamanye amaxesha aphikisayo wombhali. Ukongeza, ubonelela ngezimvo kunye neengcebiso kubo bonke abo bakhe bajongana nomceli mngeni wokubhala: mababhale ngantoni? Ungalungisa njani iyelenqe? Yeyiphi imikhwa kunye nezithethe azilandelayo? Kodwa kulo mbhalo usondeleyo, ugcwele ukutya okutsha, okumnandi kunye nobuntu, abafundi baya kufumanisa, ngaphezulu kwako konke, ukuba unjani uHaruki Murakami: indoda, umntu, kwaye baya kuba nelungelo lokufikelela kwi "workshop" yenye yezona funda ngokubanzi ababhali bexesha lethu.
Njengoko ubona, isiciko esimibalabala esifana nezo zeTusquets Editores sizisebenzisile xa kufikwa kumbhali waseJapan. Ukwamele umhlaba we-«Murakami» kakuhle kakhulu ngenxa yealbham yakhe, umculo uhlala ukho kuzo zonke iincwadi ezibhalwe nguye, ngentambo yentambo yakhe, yikati ... ndathi, inemibala kwaye Isimbozo saseJapan.
La umhla ngqo upapasho lubekelwe okulandelayo Epreli 4. Iya kuba nenani elipheleleyo le- Amaphepha ayi-304 kwaye ixabiso layo liya kuba 19,90 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Incwadi entsha kaHaruki Murakami iza kungekudala
Iindaba ezimnandi! Enkosi
Ubusuku bubuthambile ... kwiminyaka engama-196 emva kokufa kukaJohn Keats